Samsung Galaxy S21 Plus vs Apple iPhone 12 Pro: Ndeupi mureza waunofanira kutenga?
Samsung's Galaxy S dzakateedzana inowanzo kuve yakajairika-mutakuri weApple mafoni - kunyanya muNorth America - uye saka zvinongoitika kuti ivo vanofananidzwa neApple's iPhones. Mukuenzanisa uku, isu tiri kukanda maviri "epakati-mwana" zvishandiso Apple's uye Samsung yazvino miragi kurwisa imwe - sei Samsung Galaxy S21 Plus famba uchipesana ne iPhone 12 Pro?
Samsung Galaxy S21 + vs Apple iPhone 12 Pro: Magadzirirwo uye Kuenzanisa
Gorilla Girazi kumashure
Gorilla Girazi Kukundwa kumberi
Stainless simbi yepakati-furemu
Girazi pamberi uye kumashure
"Ceramic Shield" yekudzivirira girazi
Zviyero & Kurema
187 magiramu (Global)
189 magiramu (USA)
6.7, FHD + Dynamic AMOLED 2X kuratidza
120Hz kusiyanisa zororo mwero
20: 9 yakaenzana nechiyero
1300nits inopenya kupenya
6.1 ″ Super Retina XDR OLED Ratidza
2,532 1,170 x 460 resolution, XNUMX PPI
3x Makore @ 2.8GHz +
4x Makore @ 2.4GHz
USA neChina: Qualcomm Snapdragon 888
Ram & Kuchengetedza Sarudzo
128GB (Ram haina kuziviswa)
256GB (Ram haina kuziviswa)
512GB (Ram haina kuziviswa)
25W USB Power Dhirivhari 3.0 inokurumidza kuchaja
15W isina wajaja
4.5 reverse wireless kuchaja
Hapana charger mubhokisi munzvimbo zhinji
2,815 mAh bhatiri sekutenderwa zvinyorwa
15W Wireless Kuchaja neMagSafe
7.5W Qi Wireless Wachaja
Hapana charger mubhokisi
chibatiso Ultrasonic In-Ratidza Fingerprint Scanner Chiso ID (TrueDepth kamera yekutaridzika kumeso)
Kumusoro kamera (s)
Kutanga: 12MP, yakafara-angle lens, f / 1.8, 1 / 1.76 ″, 1.8µm, OIS, Dual Pixel PDAF
Sekondari: 12MP, Ultra-wide-angle lens, f / 2.2, 1 / 2.55 ″, 1.4µm
Chikoro chepamusoro: 64MP, telephoto lens, f / 2.0, 1 / 1.76 ″, 0.8µm, PDAF, OIS
Sekondari: 12MP, Yakakura-yakafara kona
Chikoro chepamusoro: 12MP nhare
Mberi kamera (s) 10MP, f / 2.2, 1.22µm, Dual Pixel PDAF 12MP, f / 2.2
Port (s) USB 3.2 Type-C Proprietary Mheni chiteshi
Ultra-Wide Bhendi (UWB)
Wi ‑ Fi 6 (802.11ax) ine 2 × 2 MIMO
Software Samsung Imwe UI 3.1 yakavakirwa Android 11 iOS 14
Zvimwe Zvikamu IP68 IP68
Pricing Inotanga pa $ 999 Inotanga pa $ 999
Samsung Galaxy S21 Uye XDA Foramu || Apple iPhone 12 Pro XDA Foramu
Dhizaini uye Hardware
Iyo contour yakatemwa dhizaini inopa iyo Galaxy S21 Plus kutaridzika kutaridzika
Chimwe chezvinhu zvinonakidza nezve kushandisa Android ndechekuti mabhureki ari kuda kwazvo kuchinjisa maitiro avo gore gore. Uye saka, nepo iyo iPhone 12 Pro ichinyanya kuita kunge iyo iPhone 11 Pro kumberi nekumashure, iyo pachayo isina kutaridzika zvakanyanya kusiyana neiyo iPhone XS uye iPhone X, iyo Galaxy S21 Plus ine yakanyanya kusati yamboonekwa dhizaini yekutenda kune yakasarudzika inotarisa kamera module. Yakaburitswa "contour yakatemwa" neSamsung, hafu yeGirazi S21's kamera module inosangana zvisina musanganiswa mune aluminium chassis. Iko kutaridzika uye dhizaini izvo zvisati zvamboitwa uye zvinopa iyo Galaxy S21 Plus kutaridzika kunoshamisa.
Iyo iPhone 12 Pro ine iyo ikozvino-iconic iPhone notch yakatenderedza kumberi, nepo iyo Galaxy S21 Plus iri kazhinji isingamedzwe kuratidzwa chengetedza iyo diki gomba kubaya-kunze. Kudzoka mumazuva ekutanga-denda, munhu anogona kupokana kuti iPhone notch yakakosha nekuti Face ID inobatsira - asi mune yanhasi zera rekugara uchipfeka maski, uine kuzivikanwa kumeso senge chete fomu yekuchengetedza biometric rave dambudziko guru. Paunofunga kuti iyo-kuratidza chigunwe chigunwe cheiyo Galaxy S21 yakateedzana yakagadziridzwa zvakadaro zvakare (iri 1.7x yakakura kupfuura sensors yechizvarwa chekupedzisira), haina-brainer - ini ndichatora diki gomba-punch pamusoro pe notch chero zuva. Iyo Galaxy S21 Plus 'inoratidzira zvakare inowedzera kupenya (pane yakakura 1500 nits kupenya), inozorodza pamwero wakakwira (zvine simba kugadzirisa pakati pe48Hz ne120Hz), uye ine resolution yepamusoro.
Ipo ini pachangu ndichisarudza iyo Galaxy S21 Plus 'inotarisa pamusoro peiyo iPhone 12 Pro, iwo angori maonero angu ekuzviisa pasi. Kana zvasvika pakuvaka nekusimba, iyo iPhone 12 Pro yakasimba zvakanyanya, nekuda kwenzvimbo dzakapetwa simbi isina simbi ichienzaniswa neGlass S21 Plus 'yakatetepa aluminium chassis. Nezvo zvakati, zvakadaro, ini ndinowana iyo Galaxy S21 Plus yakasununguka kubata nekuda kweiyo yakadzikira chikamu chikamu uye nemativi akapoteredzwa.
Software uye Zvakakosha Zvimiro
Iyo Galaxy S21 Plus inomhanya Imwe UI 3.1 pamusoro peiyo Android 11; iyo iPhone 12 Pro inomhanya iOS 14. Hapana chikonzero chakakura pakuenzanisa ese ari mairi zvakadzama, sezvo rimwe divi riine vanovimbika avo vakadzika midzi mukati meiyo ecosystems. Ini pachangu ndinosarudza Android pamusoro peIOS nekuda kwekuwedzera maitiro, yakanyatsowirirana mafirita system, uye kugona kumhanyisa maviri kana akawanda maapplication panguva imwe chete. Imwe UI 3.1, kusiyana neyekare Samsung software matehwe, haikanganise neAroid zvakawandisa, uye zvimwe zvinounza izvo zvinounzwa zvinogamuchirwa zvakanyanya, kunze kwemabloat ese Samsung maapps akadai seBixby.
Iko Apple yeIOS inokunda ndiko kusangana kweecosystem. Kunyangwe iri kutumira mafaera kubva ku iPhone 12 Pro kuenda kuMacBook kuburikidza neAirDrop, kana kurekodha memo yezwi pane Apple Watch uye ita kuti iro faira riwanikwe riwanikwe pane iyo iPhone kana iPad, kana nzira yaunogona kushandisa iyo iPhone seremote control Apple TV, panongova neyekukura ecosystem yezvigadzirwa, kubatana kwepedyo, uye yepamusoro yechitatu-bato app rutsigiro kune Samsung ecosystem. Samsung iri kuyedza uye kufambira mberi, zvisinei: iyo Galaxy Buds Pro iyo yakaburitswa padivi peiyo Galaxy S21 nhepfenyuro inogona kuchinja pakati peGPS S21 Plus uye, iti, a Galaxy Tab S7. Iyo Galaxy Watch 3 iyo yakaburitswa mukupera kwa2020 zvakare zvine mutsindo ndiyo inokwanisa kwazvo Android smartwatch uye anouya pedyo kune iyo Apple Watch 5 sechero imwe inopfeka. Pachine nzvimbo yakawanda yekuvandudza, saka Apple inoenderera kumberi mune ino.
Iyo iPhone 12 Pro ine chiitiko chiri nani che ecosystem, asi iyo Galaxy S21 Plus chishandiso chinowirirana checomputer
Iyo Galaxy S21 Plus inonyanya kuita seye komputa mudziyo, zvisinei, nekuti software yayo inogona kupetwa seye komputa yedesktop kana iwe ukaibaya muchiratidziri woibatanidza nekhibhodi - Samsung inodaidza iyi ficha DeX. Iyo iPhone 12 Pro inoramba iri foni chete.
Iine 5nm machipisi inosimbisa chishandiso chimwe nechimwe - kana foni ipfupi pane yakasvibira bhiza. Nehunyanzvi kutaura, Apple's A14 Bionic ichiri kurova Qualcomm's Snapdragon 888 mumabhenji, asi haina kuita sekuti gwanza rinobatika mune chaiwo-epasi mashandisiro mamiriro.
Muchokwadi, iyo Galaxy S21 Plus dzimwe nguva anonzwa nekukurumidza, kunyanya nekuda kweiyo 120Hz yekuvandudza mwero. Zvepamoyo mifananidzo senge yekuvhara maapplication inzwa zippier pane iyo Galaxy S21 Plus pane pane iyo iPhone 12 Pro.
Kubheja pamafoni ese ari maviri hapana nyaya, sezvaitarisirwa. Kugadziridza mavhidhiyo kunoratidzika kunge kwakakwirira pane iyo iPhone 12 Pro - iyo yemuno kamera app inobvumidza kucheka nekucheka, tisingataure iyo inopa nekukurumidza - kupfuura paGreen S21 Plus, asi chikamu cheichi chiri kukonzerwa nesoftware kupfuura kungoita mbishi yekugadzirisa simba.
Mafoni ese ari maviri ane matatu kamera kamera inovhara izvo zvino zviyero zvakafara, zvakasara-zvakapamhama, uye telephoto yakatarisana kureba. Iyo iPhone 12 Pro inoichengeta ichienderana netatu ye12MP sensors, nepo iyo Galaxy S21 Plus inoshandisa 12MP sensor kune yayo huru uye Ultra-yakafara, asi inoshandisa 64MP sensor yekutsikisa.
Mune dzidziso, iyo Galaxy S21 Plus 'yakawanda pixel-dense telephoto kamera inofanirwa kunge iri nani pakuswededza mberi nekuti kune mamwe mapikisheni eSamsung yekutamba nawo kugadzira izvo zvinonyanya kuve kukudzwa kwedhijitari kwechifananidzo. Asi mukuita, yega yekutengesa foni inokunda zvichienderana nehurefu hwakatarwa. Kazhinji, iyo Galaxy S21 Plus ichagadzira pfuti yakapinza pa10x, asi pa2x, iyo iPhone 12 Pro mifananidzo inoratidza zvimwe.
2x zoom, S21 Plus (kuruboshwe) uye iPhone 12 Pro (kurudyi)
Iyo iPhone 12 Pro's 2x zoom shots zvinogara zvakapinza kupfuura zvakafanana kupfura neS21 Plus.
Asi Pusha iyo zoom inosvika 10x, ipapo iyo Galaxy S21 Plus inotungamira nekuda kwekuve nemamwe mapikisheni eiyo Samsung software yekutamba nayo.
10x zoom, S21 Plus (kuruboshwe) uye iPhone 12 Pro (kurudyi)
Iyo Galaxy S21 Plus inogona kusundira zoom kupfuura 10x, inosvika ku30x yakakura. Asi pakupedzisira, nekuti iyo Galaxy S21 Plus inoshandisa yakakosha telephoto zoom lens setup uye kwete iyo Periscope lens, kugona kwayo kwekushomeka kunogumira.
Kana ari mamwe makamera maviri (makuru uye eupamhi-upamhi), ese mafoni anoburitsa mapikicha akanaka kwazvo ari padhuze kudana masikati. Muzhinji, iyo Galaxy S21 Plus's 12MP sensor inotora muchiedza chakawanda, asi izvi zvakare zvinoreva mapikicha ane musiyano wakadzama senge mimvuri inorasikirwa neimwe yemanzwiro avo. Iyo iPhone 12 Pro zvakare inochengetedza ruvara rwakanyatsoita kusvika kune chikanganiso, sezvo mamwe emukati mapfuti anoratidza bhuruu-ish tint nekuda kwemaketeni munzvimbo yangu yekubatira. Samsung inoda kugadzirisa mavara zvishoma kuti ibudise izvo zvainofunga kuti ipunchier kupfura.
Mumamiriro akadzika mwenje, zvisinei, iyo iPhone 12 Pro yaigaro gadzira mifananidzo inopinza ine ruzha rudiki. Iyo inobatsira kesi yaApple kuti yayo husiku modhi inorovera mukati otomatiki uye inonzwa kunge isina musono, nepo pane iyo Galaxy S21 nhare iwe unofanirwa kuswipe kune "zvimwe" chikamu chekamera app kuti uunze manheru mamiriro. Izvi zvakanaka kune avhareji vashandisi, asi vashandisi vanosarudza kuve mukutonga kwepfuti vangakoshesa maitiro eSamsung. Kuti ubvise Night Mode pane iyo iPhone 12 Pro, iwe unofanirwa kurovera pane yeyero icon pakona yekumusoro kuruboshwe kwechitarisiko uye wozoshandura manyore kuchaya kuna 0 - maneva iyo isingakurumidze uye yakanaka.
Galaxy S12 Plus (kuruboshwe), iPhone 12 Pro (kurudyi)
Iyo iPhone 12 Pro inotorawo kuhwina mukuita kwevhidhiyo - kunyangwe gaka iri gore rava padhuze kupfuura nakare kose. Mumavhidhiyo sampuli pazasi, unogona kuona iyo Galaxy S21 Plus inowirirana neiyo iPhone 12 Pro mune ine simba renji uye kunyange yakakosha kugadzikana pandinofamba. Nekudaro, pandakabaya kamera nekukurumidza pa0: 10 mucherechedzo, iyo Galaxy S12 Plus vhidhiyo inotambura neyakajairwa micro-jitters iyo yagara ichikanganisa mafoni eApple zvakanyanya kupfuura iPhones. Husiku, iyo Galaxy S21 Plus 'diki-jitter dambudziko rinowedzera, asi zvakare rinounza mune mwenje wakawanda kupfuura iyo iPhone 12 Pro munzvimbo dzine rima, kunyanya mimvuri-yakanyoroveswa zvirimwa pa0: 24 mucherechedzo.
Panyaya yekutsungirira, iyo Galaxy S21 Plus '4,800 mAh sero rakakura kwazvo kupfuura iyo iPhone 12 Pro's 2,815 mAh bhatiri (sekuenderana nechisimbiso zvinyorwa). Nekudaro, kuona kuti iyo Galaxy S21 Plus inoratidzira ine simba-nzara, uye mafoni eApple haashande-bhatiri-anoshanda pane iyo iPhone 12 Pro, kutsungirira kunogona kuve padyo. Ini ndashandisa iyo iPhone 12 Pro zvakanyanya uye ndawana hupenyu hwebhatiri kuva hwakanaka asi kwete hukuru - ndinotarisira zvakafanana kubva kuGPS S21 Plus, asi isu tichagadzirisa izvi kana tangopedza nguva yakawanda nefoni nyowani yeSamsung.
Ndeipi yaunofanira kutenga?
Ese ari maviri Galaxy S21 Plus uye iPhone 12 Pro inopa yakanakisa yekuvaka mhando, yepamusoro yekugadzirisa simba, uye chaizvo anokwanisa makamera masikati kana husiku. Nekudaro, nepo iyo iPhone 12 Pro's kamera system iri padyo padyo neApple chinopa chepamusoro (iyo iPhone 12 Pro Max yekuvandudza kamera inonyengera kwazvo), iyo Galaxy S21 Plus 'kamera system ndeye bvisa notch pazasi peiyo Galaxy S21 Ultra's. Iyo yekupedzisira ine yakasimba kwazvo zoom zoom kamera uye zvimwe zvinowedzerwa sekukwanisa kutora macro shots.
Izvi zvinoreva kuti avo vanosarudza iyo iPhone 12 Pro vanoziva kuti vari kuwana chiitiko chiri padhuze neakanakisa eApple tech, asi vatengi veGPS S21 Plus vanofanirwa kubata nenyaya yekuti mudziyo wavo inhanho inoonekwa pasi kubva pamusoro weSamsung kupa.
Semumwe munhu akaedzwa ese mana maana iPhone 12s uye ese ari matatu Galaxy S21s zvakanyanya, ndingati izvi: kana ukafunga kutenga iPhone, iyo iPhone 12 Pro ndiyo sarudzo iri nani pane iyo iPhone 12 Pro Max. Asi ine Samsung, yakabhenekerwa: iyo Galaxy S21 Ultra yakakosha mari yekuwedzera pamusoro peiyo Galaxy S21 Plus.
Iyo Samsung Galaxy S21 Plus ndiye mwana wepakati mune iyo nyowani 2021 mureza wekuteedzana, kurongedza mureza weSoC uye premium kuvaka, pamwe nekuratidzira kwakanaka uye setup kamera.
Pre-kuodha pane Samsung.com
Iyo iPhone 12 Pro inounza angangoita ese akanakisa maficha ayo Apple inofanira kupa izvozvi: ine 5nm chip, inochinjika uye inowirirana katatu-kamera system uye neprimiyamu yekuvaka mhando.
The post Samsung Galaxy S21 Plus vs Apple iPhone 12 Pro: Ndeupi mureza waunofanira kutenga? yakatanga kutanga xda-vatadzi.